काठमाण्डौमा यस्ता ठाउँमा भेटिन्छन कलेज पढ्ने देखि बारमा काम गर्ने यौनकर्मी ! - ePosttimes
Homeसमाजकाठमाण्डौमा यस्ता ठाउँमा भेटिन्छन कलेज पढ्ने देखि बारमा काम गर्ने यौनकर्मी !
६ कार्तिक २०७६, बुधबार ११:४२ समाज 0
काठमाडौँ : नेपालमा यौन व्यवसायमा सयौं होइन हजारौ युवायुवती संलग्न छन् । राजधानीका तारेहोटेलदेखि डान्सबार सम्म, गेस्ट हाउस देखि भट्टी पसल सम्म, बसपार्कदेखि सडकपेटीसम्म यो व्यवसाय व्याप्त छ । यो व्यवसायको स्थान, शैली परिवर्तन भइरहेको होला पेसा परिवर्तन भएको छैन । मध्यस्थकर्तामार्फत हुने अधिकांश यौ न व्यवसाय अहिले सामाजिक सञ्जाल (इन्टरनेट) र मोबाइलको सहायताले हुन थालेको छ । ग्लोबल फन्डले गरेको आईबीबीएस (इन्टिग्रेटेड बायोलोजिकल एन्ड बिहेवियरल सर्भिलेन्स) सर्भेक्षणले काठमाडौंमा २७ हजार यौ नकर्मी महिला रहेको औंल्याएको छ । तर त्यसको दुई गुना बढी महिला यौ न व्यवसायमा रहेको यौ नकर्मी महिलाका क्षेत्रमा कार्यरत संस्था जागृति महिला महासंघको दाबी छ ।
यौनकर्मी महिलाका क्षेत्रमा कार्यरत जागृति महिला महासंघकी कार्यक्रम निर्देशक विजया ढकालका अनुसार अधिकांश यौ नकर्मी महिलाको आम्दानी फजुल खर्च भइरहेको छैन । उनीहरूको आम्दानी आफ्ना बालबालिकाको पढाइमा, परिवारको लालनपालनमा खर्च हुने गरेको छ । त्यसबाट बचेको केही रकममात्र उनीहरूले भविष्यका लागि बचत गर्ने गरेका छन् । ढकाल भन्छिन्, नेपालमा यौ न व्यवसायमा रहेका ठूलो संख्यामा रहेका यौ नकर्मी महिला पढेलेखेका छैनन् । उनीहरू कुनै न कुनै बाध्यता र विवशताले यो पेसामा आएका छन् । त्यसैले उनीहरू आफूले कमाएको पैसा आफ्ना बालबालिका र परिवारका सदस्यको शिक्षादीक्षाका लागि खर्च गर्ने गरेका छन् । ताकि भोलिका दिनमा आफ्ना सन्तानले यौ न व्यवसाय गर्नु नपरोस् । यसका अलावा घरपरिवार, आमाबुबाको पालनपोषण, औषधिउपचारमा पनि खर्च हुने गरेको छ । आफूले लुकेर, तिरस्कार सहेर, कमाएको पैसा परिवारको र बालबच्चाको पढाइमा खर्च गरे पनि पछि तिनै परिवारका सदस्य र छोराछोरीको लाञ्छना सहनुपर्दा भने उनीहरूलाई असह्य हुने गरेको नाम उल्लेख नगर्ने सर्तमा एक अर्की यौ नव्यवसायी बताउँछिन् ।
61600cookie-checkकाठमाण्डौमा यस्ता ठाउँमा भेटिन्छन कलेज पढ्ने देखि बारमा काम गर्ने यौनकर्मी !yes